हिन्दु राष्ट्र यसरी हुन्छ भन्दै सत्तापक्षको घन्टि बजाउदैँ उत्रिए शक्तिशाली नेता खड्का
न्यूज अभियान ,काठमाण्डौ,२१ पुस । नेपाली कांग्रेसका शक्तिशाली नेता खुमबहादुर खड्का नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र घोषणा गराउन पाँचै विकास क्षेत्रको दौडाहमा निस्कने भएका छन् । सत्तापक्षको घन्टि बजाए मुलुकभर आन्दोलन् छेड्ने तयारी छ ,नेपाली कांग्रेस सनातन हिन्दूराष्ट्र महाभियान स्थापनाको ।
कांग्रेसका शक्तिशाली नेता खड्काले नेपाल सनातनी हिन्दूराष्ट्र थियो र छ, भोलि पनिरहनेछ । हिन्दूराष्ट्र महाभियानको नेतृत्व लिएका खड्का भन्छन्– हिन्दूराष्ट्र स्थापनाको अभियानलाई अब पाँचै विकास क्षेत्रमा आन्दोलनका रुपमा अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ, अब सडक आन्दोलन पनि हुन्छ ।
मध्यमाञ्चलमा खड्का आफै संयोजक हुनुहुन्छ । पूर्वाञ्चलमा लक्ष्मणप्रसाद घिमिरे, पश्चिमाञ्चलमा तारानाथ रानाभाट, मध्यपश्चिममाञ्चलमा चिरञ्जीवी वाग्ले र सुदूरपश्चिममाञ्चलमा पुष्पा भुसाल खटिनुहुनेछ ।
सबै जिल्ला र क्षेत्रसम्म हिन्दूराष्ट्र स्थापना महाअभियानको संजाल बिस्तार भइसकेको छ, संगठन अझ बलियो बनाइनेछ । अव यो महाभियान हिन्दूराष्ट्र घोषणा नभएसम्म थामिने छैन ।
नेपाली जनताको इच्छा र मर्मविपरित आगन्तुक धर्मलाई प्रश्रय दिई केहि नेताहरुले डलरकै भरमा करिब ९० प्रतिशत नेपालीले मान्दै आएको हिन्दू राज्यलाई हटाई धर्म निरपेक्ष राज्य बनाएको विरोधमा फागुनदेखि हिन्दू धर्मप्रति आस्था राख्नेहरुले आन्दोलनको आँधिबेहरी नै ल्याउने तयारीमा लागेका छन् ।
नेपालको वास्तविक पहिचान र विश्व सामु चिनिने भनेको नै नेपाल हिन्दू राज्य हो । यसरी आफ्नो मुलुकको पहिचान सनातन हिन्दू राज्यलाई सखाप पारी हरियो डलरको प्रलोभनमा पाश्चात्य धर्म अर्थात आगन्तुक धर्म क्रिश्चियनलाई भित्र्याई जुन धर्मको नाममा नेपाल र नेपालीको आस्था थियो त्यसैलाई नयाँ संविधानमा धर्म निरपेक्षताको कपोकल्पित धारा समायोजन गरी धार्मिक युद्धमा लाने तयारी नेपालकै कुर्सीमा बस्ने नेताहरुले गरेका छन् ।
तीन करोड नेपालीमा करिब ९० प्रतिशत भन्दा बढी हिन्दू धर्मावलम्बीहरुको आत्माभित्रको आस्थामा कुठाराघात गरेका छन् हरियो डलरमा बिक्ने नेताहरुले । हरेक इतिहासलाई संरक्षणको निमित्त यही भूमिमा संरक्षक पनि रहन्छन् ।
नेपाललाई दुई चार जना नेतृत्व तहका नेताहरुले जनताको इच्छा विपरित मनोमानी ढंगबाट लादेको धर्मनिरपेक्षको विरोध गर्दै जसरी पनि नेपाल र नेपालीको एउटा मात्रै पहिचान हिन्दू राज्य बनाउने अभियानमा नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा हिन्दू धर्मका धरोहरका रुपमा उभिनु भएका खुमबहादुर खड्का लाग्नु भएको छ ।
जसरी पनि नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउने अभियानमा लाग्नुभएका खड्काले मुलुकभरका हिन्दू धर्मप्रति आस्था राख्नेहरुलाई समेटेर आगामी फागुन दोस्रो हप्ता अथवा चैतदेखि आन्दोलनको आँधिबेहरी नै ल्याउने तयारीका साथ लाग्नु भएको छ ।
खड्कासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
हिन्दुराष्ट्र बनाउनको लागि तपाई के गर्दैहुनुहुन्छ ?
मैले त यसबारेमा आफ्नो केन्द्रिय समितिमा पनि कुरा राखेको छु । अब संसदमा भएका साथीहरुले यो निर्णय गर्नुपर्ने हो । संविधान संशोधनमा हिन्दुराष्ट्रको कुरा गर्न पार्टीले गर्नुपर्ने हो । राप्रपाले गर्नुपर्ने हो । उहाँहरुले के गर्नुहुन्छ वा गर्नुहुँदैन ? यो मलाई थाहा छैन । म सदनमा छैन । तर जनताको माँझमा गैरहेको छु । जाँदै छु । अनि जान्छु पनि । म त अब अन्तिम लडाई लड्ने तयारी गरिरहेको छु ।
उसो भए अब हिन्दु राष्ट्र बनाउनको लागि तपाई कुनै कसर बाँकी राख्नुहुन्न ?
हिन्दु राष्ट्रका लागि म कुनै कसर बाँकी राख्दिन् ।
अहिले पार्टीहरुको मत त्यतातिर छैन ? अनि तपाई कसरी हिन्दुराष्ट्र बनाउनुहुन्छ ?
जनता नै महान हुन् । उनीहरको निर्णय नै निर्णायक छन् ।
तपाईको पार्टीकै सभापति हिन्दुराष्ट्रको पक्षमा हुनुहुन्न । उसो भए तपाई उहाँलाई कसरी हिन्दुराष्ट्रको पक्षमा ल्याउनुहुन्छ ?
कोशिश गर्ने हो । मैले त भनिरहेको छु । उहाँ आउनुहुन्छ । तर मेरो अडान के हो भने पार्टीको महासमिति बैठक बोलाउँ अनि त्यहाँ छलफल गरौं भन्ने हो । जे हुन्छ त्यही गरौं ।
सभापतिले महासमिति बैठक बोलाउनुहुन्छ त ?
बोलाउनु होला नि । मैले त प्रस्ताव राखिसकेको छु । केन्द्रिय कार्यसमितिमा यो प्रस्ताव मैले गरेको छु । एक न एक दिन बोलाउनुहोला नि । यदि बोलाउनु भएन भने मैले चैत्रबाट आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेको छु ।
उसो भए तपाईको आन्दोलनमा क–कसको सहयोग रहन्छ ?
सबैको सहयोग हुन्छ वा हुँदैन त्यो मलाई थाहा छैन । तर अधिकांश नेपाली जनता र कार्यकर्ताको सहयोग हुन्छ ।
आजको दिनमा तपाईसँग कति प्रतिशत केन्द्रिय सदस्यहरु तपाईको पक्षमा छन् ?
होईन, कतिपय साथीहरु नेताको पछि लागेर बोल्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न तर हामी धेरै छौं । कतिपय साथीहरु सुस्त सुस्त खुल्नुहुन्छ ।
तपाईको कुरा पार्टीमै कसैले सुन्दैनन ? अनि असम्भव कुरा गरेर तपाई किन समय खेर फाल्दैहुनुहुन्छ ?
मैले त आफ्नो कुरा भनिरहेको छु नि । म त चैत्रबाट आन्दोलनमा जान्छु । जनताले माने त्यो संविधान हुन्छ । नमाने त्यो कागजको खोष्टो हुन्छ ।
उसो भए ०७२ सालमा जारी भएको संविधान नेपालको संविधान हो कि होईन ?
नेपाली जनताले मानेको भए यस्तो किन हुन्थ्यो र ? जनताले यो संविधानलाई स्विकार गरेकै छैनन नि ।
अनि यो कुरा काँग्रेसले किन भन्न सकेको छैन ?
यसबारेमा काँग्रेसले निर्णय गर्न सकेन भने खाल्डोमा जान्छ । अब भीरबाट गोरुलाई राम राम भन्ने हो अरु के गर्न सकिन्छ र ? त्यसैले अब काँग्रेसका कार्यकर्ताहरुले यसबारेमा सोच्नुपर्छ ।
उसो भए पार्टी सभापतिसँग तपाईको असन्तुष्टि पनि छ ?
छैन । मेरो कुनै असन्तुष्टि छैन । तर कामकारवाही एकदमै ढिला भैरहेको छ ।
अहिलेसम्मको यहाँको बुझाईमा देउवा सफल कि असफल ?
यो कुरा मैले भन्ने कुरा हो र ? अहिले देउवाको कार्यशैली पनि असफलताको बाटोमा जाँदैहुनुहुन्छ ।
अनि तपाईले पार्टीमा उपसभापतिको दाबी छोडिदिनुभएको हो ?
मेरो सहमति भएको हो । उहाँले मलाई उपसभापति बनाउन सक्दिन भन्नुभयो । त्यसैले मेरो सहमति छ । तर उहाँले मलाई तेहर्«ौं महाधिवेशनमा उपासभापति बनाउँछु भन्नुभएको थियो । यो कुरा त दुनियाँले थाहा छ नि ?
तर गोपालमान श्रेष्ठले त तपाईले उहाँलाई उपसभापति बनाउन सहयोग गर्छु भन्नुभएको थियो रे नि ?
मैले म नबन्ने भएपछि उहाँलाई फोन गरेको हो । यो कुरा सत्य हो । सभापतिले जसलाई चाहनुभएको छ, त्यसलाई बनाउँदा हुन्छ ।
संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई काँग्रेसले स्विकार गर्ने कि अस्विकार गर्ने ?
अब यो प्रस्ताव पारित हुँदैन । त्यसैले यो प्रस्ताव फिर्ता लिनु भन्दा अर्को कुनै विकल्प छैन । आन्दोलनलाई चर्काउने काम गर्नुहुँदैन । सकेसम्म यसलाई भोलि नै नभए पनि पर्सि नै फिर्ता गर्नुपर्छ । यो मेरो व्यक्तिगत भनाई हो ।
तर राप्रपाले सहयोग गर्यो भने त प्रस्ताव पारित हुन्छ अरे नि ?
त्यो पनि मुश्किल मुश्किल नै होला । तर मधेशवादी दलहरुले नै यसको विरोध गरिरहेका छन् ।
संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन गरेर अघि बढ्यो भने नि ?
परिमार्जन भनेको के ? भाषाको कुरा नेपाली भाषा राष्ट्रिय भाषा हो ।
५ नम्बर प्रदेश तलमाथि गर्ने वा मधेश र पहाडलाई अलग गर्ने कुरामा यहाँको सहमति छ कि छैन ?
सबैभन्दा पहिले यो प्रस्ताव मैले नै राखेको हुँ । यदि देशले निकास पाउँछ भने यो कुरा हामीले मान्नुपर्छ भनेको हुँ । सभापतिले सबै पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरेर नै यो प्रस्ताव ल्याएको हो । तर जनताहरु सडकमा उत्रिएका छन् । अब यसबारेमा पार्टीले पूर्नविचार गर्नुपर्छ ।
तपाईहरु अहिले संघीय प्रणालीको विपक्षमा उभिनु भयो नि ? किन ?
संघीयता भनेको कुरा नै गलत हो । म यसको पक्षपाती होईन । विदेशीहरुले चलखेल गर्दैछन् । म संघीयताको विरोधी पनि होईन । मान्ने हो भने ५ प्रदेशमा जानुपर्छ ।
तर तपाईलाई गणतन्त्रविरोधी नेता भनेर पनि भनिन्छ नि ?
म गणतन्त्रको विरोधी होईन ।
तपाईमाथि राजसंस्था फर्काउन चाहने भनेर आरोप छ ?
भन्नेहरुले त मलाई के के भने । भने नि । हिजो रअको मान्छे भएँ । अहिले राजा गएको १० वर्ष भयो, म राजावादी भएँ । एउटा कुरा सत्य कुरा के हो भने यो देशमा राजसंस्था हटाउने बेला सबैभन्दा पहिले गणतन्त्रको पक्षमा कुनै माईका लालले बोल्न नसकेको बेला मैले नै यसकोबारेमा बोलेको हुँ । त्यतिवेला मैले गणतन्त्रको प्रस्ताव केन्द्रिय समितिमा राखेको थिएँ । तर जुन दिन राजसंस्था फ्याँकिदै थियो, त्यतिवेला मैले के भने नेपाली काँग्रेस कमजोर भएको छ। त्यसैले मैले राजसंस्थालाई कुनै न कुनै स्पेश दिनुपर्छ भनेको हुँ ।
ज्ञानेन्द्र शाहलाई पूनः राजा बनाउन तपाई लाग्नुभएको छ भन्ने आरोप पार्टीभित्रैबाट तपाईलाई लगाईएको छ नि ?
लगाउनेले जेसुकै आरोप लगाउन न । राजा हटेको १० वर्ष भयो । तर पूर्वराजाको भ्रमणमा वा राजा जिल्ला जाँदा मान्छेहरुको ठूलो भिड लागेको छ । किन लाग्ने गरेको छ त यो भीड ? केही आकार्षण छ र त हेर्ने जान्छन् । यो राष्ट्र पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको राष्ट्र हो । राष्ट्र बचाउन नेपाली काँग्रेसले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
भनेपछि तपाईलाई पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले मोहनी लगाए ?
मलाई कसैले मोहनी लगाउनुपर्दैन् । हिजो म माओवादीसँग पनि भीडेको हुँ । एमालेसँगपनि भिडेको हुँ । अहिले पार्टीभित्रपनि म लडिरहेको छु ।
भनेपछि तपाई र ज्ञानेन्द्रवीच भेटवार्ता भएको छ नि ?
भनेपछि अब तपाई राजासहितको प्रजातन्त्रको वीपीको मेलमिलापको नीतिमा जान लाग्नुभएको हो ?
म बीच बाटोमा छु । म पार्टीभित्र वीपीको विचार हुबहु लागु गर्नुपर्छ भन्नेपक्षमा छु । वीपीको विचारमा अघि बढ्न सकिएन भने काँग्रेस पार्टी पनि काम लाग्दैन ।